ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖွဲ့စည်းပုံ ချိုးဖောက်သည်ဟု ဇာဂနာက ပြောသည့် ပုံဖြင့် သတင်းမှား ဖြန့်နေ – Network Media Group
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို မလိုက်နာပဲ ချိုးဖောက်တဲ့အတွက် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတာဆိုပြီး ဇာဂနာ ပြောဆိုထားသယောင် ရေးသားထားတဲ့ သတင်းအမှား တစ်ခုဟာ နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ညက Facebook လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ စတင်ပြန်နှံ့လာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီ ၃၇ မိနစ်မှာ Nanda Kyaw ဆိုသူ အကောင့်ပိုင်ရှင်က “ကံကောင်းပါစေ အောင် ဆန်းစုကြည် စစ်တပ်အာဏာထိန်းတာ လေနဲ့ဝမ်း မကွဲသူတွေအတွက် ကိုသူရ (ခ) ဇာကနာ ပြောထားတာလေး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးသားထားတာပါ။
Nanda Kyaw ဆိုသူ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ဇာဂနာပုံကို အသုံးပြုပြီး ဇာဂနာ ပြောထားသယောင် ရေးသားထားတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေပါတဲ့ သူ့ရဲ့စာကို အခုလိုအစချီထားပါတယ်။
“ပြည်သူအများတွေးတာက စစ်တပ်က… လက်နက်အားကိုးနဲ့ အာဏာသိမ်းတယ်… မတရားဘူးပေါ့…. သူတို့မ တွေးတာက…ဒေါ်စု..အစိုးရက အာဏာရတက်လာပြီး… မကြာမီမှာဘဲ ဥပဒေကို… သိသာထင်ရှားစွာ.. ချိုး ဖောက် ပြလိုက်တယ်..အဲ့ဒါကိုသူတို့မသိဘူး။ သမ္မတဦးထင်ကျော်…ရာထူးကနှုတ်ထွက်တဲ့ အခါအခြေခံ ဥပဒေ အရ.. ဒု သမ္မတ(၁)က သမ္မတရာထူးတက်… ဒုသမ္မတ(၂) နေရာကို ရွေးရမယ်… ဒါပေမဲ့ အန်တီက.. စီနီယာ အတိုင်း.. မလုပ်ဘဲ.. စည်းလွတ်ဘောင်လွတ်..လက်ထဲအာဏာ.. ငါတို့မှာရှိတာဆိုတဲ့… ပုံစံမျိုး.. လုပ်ပြခဲ့တယ်.. အမှန်တော့အန်တီက..ခြေဥကိုကျမ်းကျိန်ပြီး..တက်လာတာခြေဥထဲက…ဥပဒေကို..လေးစားလိုက်နာရမှာပေါ့ မလိုက်နာခဲ့ဘူး” ဟု ရေးထားသည်။ (မူရင်း အရေးအသား အတိုင်း ဖြစ်သည်။)
ဒါ့အပြင် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲကာလ သမ္မတက ပါတီကိုယ်စားပြု မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်း တွေ၊ မဲစာရင်းကွာဟမှုအကြောင်းတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ဥပဒေဘောင် အတွင်းက လုပ်ဆောင်ဖို့ UEC ကို စစ်တပ်က အကြိမ်ကြိမ် သတိပေးပြောဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ၊ စစ်တပ်ဖက်က ဘာတစ်ခုမှ လွန်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို ဇာဂနာ ပြောဆိုထားသယောင် ရေးသားထာပြီး အဆုံးမှာ“ကံကောင်းပါ စေလို့ ဆုတောင်းပေးရုံကလွဲပြီး တစ်ခြားမရှိ ကိုယ်စိုက်ခဲ့အပင် ကိုယ်စားပေါ့ ချိုတယ်ငံတယ် ပြောမရဘူး။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ပဲပေါ့။ Crd. ဦးသူရ” ဆိုပြီး အဆုံးသတ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီ Nanda Kyaw လိုပဲ ဦးအောင်ဇေယျဆိုသူကလည်း အဲဒီစာကိုပဲ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထားတာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။
Nanda Kyaw နဲ့ ဦးအောင်ဇေယျတို့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ပြောဆိုရေသားမှုဟာ မှန်ကန်မှု မရှိတဲ့ သတင်း အမှားတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဇာဂနာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ကမှ ထောင်ကနေ ပြန်လွတ်လာတာ ဖြစ်ပြီး သတင်း မီဒီယာတွေနဲ့လည်း အင်တာဗျူးဖြေဆိုထားတာကို ယနေ့အချိန်အထိ မတွေ့ရသေးသလို လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေမှာလည်း Nanda Kyaw နဲ့ ဦးအောင်ဇေယျ အကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ ရေးထားသလိုမျိုး သူ့ ဖက်က ရေးတင်ထားတာကိုလည်း မတွေ့ရပါဘူး။ ဇာဂနာရဲ့ Facebook အကောင့်ကလည်း အခုအချိန်မှာ Deleted လုပ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Nanda Kyaw တင်ထားတဲ့ သတင်းအမှားကို လက်ရှိအချိန်အထိ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေသူ ၇၀ နဲ့ အထက်ရှိနေသလို ဦးအောင်ဇေယျဆီမှာလည်း လက်ရှိအချိန်အထိ ထပ်ဆင့် ဖြန့်ဝေသူ ၁၁၀ နဲ့ အထက်ရှိနေပါတယ်။ Comment ရေးသားသူနဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်သူ တော်တော်များကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
အခုလိုမျိုး နိုင်ငံရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာဆိုရင် သတင်းအမှားဖြန့်ဝေသူတွေက နာမည်ကြီး အနု ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသူတွေ၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေက မပြောပါပဲလျက် ပြော ဆိုထားသယောင် သတင်းအမှားတွေကို ဖန်တီးပြီး ရေးသားမှုတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြုလုပ်လာတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူမှုကွန်ရက်ပေါ်က စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအနေနဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် သတင်းတွေ ကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ်ပြီး/ကြည့်ပြီး ထပ်ဖြန့်ဝေတော့မယ်ဆိုရင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းဌာနတွေကနေ တက် လာတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ သေချာ စီစစ်ပြီးမှ ဖြန့်ဝေပေးဖို့ လိုပါတယ်။